DEG-DEG: Ciyaartoy Caan Ah Oo Cusbitaalka Loola Caray Markii Uu Taagnida Ka Dhacay - Laacib
HomeWararka CiyaarahaDEG-DEG: Ciyaartoy Caan Ah Oo Cusbitaalka Loola Caray Markii Uu Taagnida Ka Dhacay
DEG-DEG: Ciyaartoy Caan Ah Oo Cusbitaalka Loola Caray Markii Uu Taagnida Ka Dhacay
Weeraryahanka kooxda Wigan Athletic ee heerka labaad uga dhacday Premier League ee Charlie Wyke ayaa cusbitaalka loola cararay kaddib markii uu taagnida ka dhacay isaga oo tababarka la qaadanaya kooxda, isla markaana uu miyir beelay.
28 jirkan ayaa ku jiray gudaha garoonka tababarka markii uu miyir beelay ee uu dhulka ku dhacay, waxaana gargaar degdeg ah u fidiyey dhakhaatiirta kooxda oo markii dambena ula cararay cusbitaalka.
War-saxaafadeed ay soo saartay Wigan ayay ku sheegtay in laacibkani uu kasoo baxay koomada laakiin uu cusbitaalka ku jiri doono maalmaha soo socda, si loogu sameeyo baadhitaano dheeraad ah, isla markaana loo siiyo daryeel caafimaad, si aanay xaaladdiisu khatar u gelin.
Agaasimaha kooxda Wighan Athletic ee Mal Brannigan, ayaa warbaahinta u sheegay: “Qof kasta oo ka tirsan Wigan Athletic waxa uu isha ku hayaa xaaladda Charlie iyo badqabkiisa caafimaad, waxaanay taageero siinayaan isaga iyo qoyskiisaba.
“Koox ahaan, waxa aanu qiimaynaynaa shaqaalaha caafimaadka NHS oo aanu ognahay in waqtigan adag ay si degdeg ah uga jawaabeen daryeelka Charlie, si dhowna ula shaqaynayaan shaqaalaha tababarka kooxda.”
Charlie ayaa noqday ciyaartoygii labaad ee toddobaadkan miyir-beela ee dhulka ku dhaca, waxaana ka horreeyey John Fleck oo ka tirsan kooxda Sheffield United oo ciyaartii Readin ee usbuucan koomo ku galay.
Sidoo kale, ciyaartii xalay ee Real Madrid iyo Sheriff waxa garoonka dhexdiisa ku dhacay FC Sheriff oo koomo galay daqiiqadihii ugu dambeeyey.
Maxaa sababaya koomada talow